I-China Household switch switch Hand Hand Shower Head Venzi & Suppliers-Huanyu Sanitary Ware
Ikhaya > Iimveliso > Intloko yeshawari > Intloko yeshawa yesandla > Intloko yeshawa yesandla yoMkhaya Tshintshela
China Household Switch Hand Shower Head Abavelisi kunye nababoneleli
sinikezela ngeshawa yesandla soMzi entloko ekumgangatho ophezulu wechrome eneWaranti yeminyaka emi-2. yomelele kwaye yomelele. Sizibophelele kwimpahla yococeko iminyaka eyi-10, kwaye abathengi bethu babekwe kwimimandla eyahlukeneyo yehlabathi. Sijonge phambili ekubeni liqabane lakho lexesha elide eTshayina.
2.Iparamitha yeMveliso (Inkcazo)
Intloko yeshawa yesandla yokutshintsha kwendlu
1.6±0.05Mpa kunye ne-0.05±0.01Mpa, gcina i-1 min, akukho kuvuza
Uvavanyo lwesitshizi se-asidi yetyuwaâ‰¥24 okanye iiyure ezingama-48
OEM & ODM zamkelwe
3.Uphawu lweMveliso kunye neSicelo
Intloko yeshawa yesandla yokutshintsha kwendlu, ilungele zonke iintlobo zamagumbi okuhlambela, akukhathaliseki nokuba sekhaya, iihotele, okanye ezinye iindawo zifuna izixhobo zokuhlambela.
Iplastiki entsha ye-ABS, engeyiyo ityhefu, ukumelana nokunxiba kakuhle, ukumelana nobushushu obuphezulu, ubungqina obuhle bokungaqhushumba
Ulungelelwaniso lwe-Multi-function ye-five-speed:
2.Imowudi yokuxuba i-Mist-spray
4.Ipateni ye-pulse ye-Double-row
Ubungakanani bojongano olusemgangathweni lwamazwe ngamazwe G1/2.
Ukuba ufuna ezinye izatifikethi ezifana ne-ACS, SASO, ETC., siyavuya ukunika uncedo kuwe.
6.Ukuhambisa, ukuhambisa kunye nokuKhonza
Siya kukhetha eyona ndlela ilungileyo ngokwezicelo zabathengi.
1. NgoMoya, kwisikhululo seenqwelomoya esibonisiweyo.
2. Nge-Express (FedEx, UPS, DHL, TNT,EMS), kwidilesi ebonisiweyo.
2. NgoLwandle, ukuya kwizibuko lolwandle elibonisiweyo.
Q. Loluphi uhlobo lwenkampani esiyiyo?
Siyinkampani yorhwebo kwaye sinefektri yethu.
Inkampani yethu ibekwe eCixi, eNingbo, ekufutshane kakhulu neHangzhou Bay Cross-sea Bridge. Kuya kuthatha iyure e-1 ngeMoto ukusuka eHangzhou, kunye neeyure ezi-2 ngemoto evela eShanghai.
Q.Ngaba ubunawo amabango kwaye uye wawenza njani ngawo?
Ukuba ingxaki kuthi idesignã soratchã ukuvuza kunye nephakheji, siya kuthatha uxanduva olupheleleyo.
Ukuba ingxaki evela kuthutho, sinokunikezela ingxelo yoVavanyo lwe-Fall Down, inceda ibango lenkampani yokuthumela.
Ukuba kukho iimveliso ezineziphene ezinobungakanani obuncinci, siya kuthumela ukutshintshwa kulandelelwano olulandelayo njengomfanekiso wakho okanye i-vedio.
Q.Ukuqinisekisa njani umgangatho wemveliso?
IsiQinisekiso soMphezulu: I-100% yokuhlola ukunqanda nakuphi na ukukrwela, ukuphoswa kweplating, wenze ukucoca umphezulu ngaphandle kwechaphaza.
Isiqinisekiso sosetyenziso: Vavanya phantsi koxinzelelo lwamanzi lwe-0.5MPa, qiniseka ukuba yonke intloko yeshawari inokusebenza kakuhle ngaphandle kokuvuza.
Isiqinisekiso esiKhuselekileyo: Sebenzisa i-ABS esempilweni kunye nemathiriyeli yerabha, ukunqanda nakuphi na ukungcoliseka kwamanzi kwizinto eziphathekayo
Siyavuya ukubonelela ngesampulu yasimahla kumthengi, kunye ne-odolo yesilingo esincinci samkelwe, kodwa siyathemba ukuba ungafikelela kwintlawulo yezothutho, kwaye inokunqunyulwa nje ukuba ubeke iodolo.
Iifayile ezishisayo: Intloko yeshawari yesandla soMzi, abavelisi, iholeyili, iTshayina, ixabiso, umzi-mveliso, ababoneleli
Ishawa yesandla ye-Electroplating enamacala amabini